Ahoana no mba hanaraka ny zaza ao Italia
Dia an’aliny italiana ny fianakaviana amin’izao fotoana izao no miandry ny hanaraka ny zaza, na tany Italia sy any ivelany.»Maro ny mpivady firotsahana amin’ny mirazotra lalana nasionaly sy iraisam-pirenena, avy eo, dia ny fiainana mba hisafidy ho azy ireo,»hoy ny fanazavan’i Daniela guido Bertolaso ny fikambanan’ny turin Namana Don Bosco, iray amin’ireo sampan-draharaha nahazo ny fanohanana ny mpivady amin ‘ny lalan’ ny fananganan-jaza iraisam-pirenena -. Ary amin’ny teny italiana ny fianakaviana matetika dia tena malaza any ivelany, satria izy ireo dia heverina ho anisan’ny manintona indrindra ao amin’ny tena.»Inona no tokony hatao mba hanaraka ny zaza Izay maniry ny hanaraka ny zaza ao Italia dia tsy maintsy mandray ny lalana marina. Ny fanontaniana amin’ny tanora fitsarana mahefa ny adiresy fonenana. Matetika dia tsy maintsy mampiditra ny sasany antontan-taratasy (ara-pitsaboana taratasy fanamarinana, ny heloka bevava dia mirakitra ny mpiadina, fanambarana ny vola miditra, payroll, ny fanambarana ny fankatoavana ny fananganana ny ampahany ny»ho avy nitaiza ray aman-drenibe»), fa ny antontan-taratasy ilaina amin’ny miovaova arakaraka ny fitsarana any amin’ny fitsarana. Misy ny fivoriana miaraka amin’ny mpiasa ara-tsosialy. Amin’ny fandraisana ny fampiharana azy, ny mpitsara tanora nijery, ary, raha toa ka heveriny ny mpivady mety, mandefa ny antontan-taratasy eo an-toerana ny tolotra ara-tsosialy. Tamin’io fotoana io, mpiasa sosialy mitàna ny andian ny fivoriana mba hahafantatra ny mpivady sy hijery ny mety ho eo amin’ny ray aman-dreny, na ny fitsaboana amin’ny alalan’ny fanadihadiana ara-tsaina sy ara, ankoatra ny fanadihadiana iray nataon’ny the filaminam-bahoaka taova. Rehefa avy nanangona ny vaovao ilaina, ny mpiasa ara-tsosialy dia mamindra ny tatitra ny tanora fitsarana, izay manana roa volana ny fotoana mba hamoaka (na tsia) ny didim-panjakana ny vady sahaza ho atsangan’ny olon-kafa.
Raha toa ka ny roa no hita fa mety, dia tafiditra ao amin’ny lisitra, ary dia tsy maintsy miandry miaraka amin’ny ankizy izay efa nanambara adoptable ny tanora fitsarana. Aorian’ny fe-potoana iray izay ny mpivady sy ny ankizy manomboka mahazo ny mahafantatra ny tsirairay, manomboka ny antsoina hoe entrustment alohan’ny fananganana, miaraka amin’ny faharetan’ny, fara fahakeliny, roa ambin’ny folo volana. Amin’ny farany, rehefa ny fifandraisana ara-tsosialy ny mpitsara tanora fahefana, ao an-tokantrano ny fananganan-jaza dia lasa farany. Ny fananganan-jaza iraisam-pirenena, inona no fiovana. Ao ny raharaha ny fananganan-jaza iraisam-pirenena, indray mandeha ny roa dia efa afaka nanambara tamin’ny taona fotoana mba hisafidy iray manery ny fampiasana ny ted ‘ny sampan-draharaha misahana ny lalana tamin’ ny Iraka iraisam-pirenena ho an’ny adoptions. Izany dia indrindra indrindra ny sampan-draharaha, ny fikambanana sy ny fikambanana tsy mitady tombontsoa voasoratra ao amin’ny ilaina ny misoratra anarana, izay manana asa manampy ny mpivady eo amin’ny fifandraisana amin’ny firenena niaviany ny zaza, dia mba hanangana tsiroaroa sy, raha ilaina, hanampy ny fianakaviana ao anatin’ny fe-potoana manaraka ny fananganan-jaza.»Mba ho fanohanana lahatsoratra-ny fananganan-jaza dia lafin-javatra izay heveriko fa tena zava-dehibe ny safidy ny fikambanana alalana haneho hevitra fa Bertolaso — satria mety ho sarotra ny mahita tsy ny momba ny fiafaran’ ny lalana ny fananganan-jaza.»Raha vao efa fantatra ny zaza, dia omena mandritra ny fivorian ny fianarana tany amin’ny firenena niaviany ny zaza, amin’ny faran’ny izay namoaka ny tahirin-kevitra fa hanompo ny anarana Iraka iraisam-pirenena ho an’ny adoptions ny authorise ny fidirana ho any sy ny hijanona ao Italia noraisin’ny zanakao. Indray mandeha ilay zaza dia niditra ny firenena, izany no tena teny italiana ny olom-pirenena sy mahomby mpikambana ao amin’ny fianakaviana vaovao. Inona no zavatra takiana mba hanaraka ny zaza. Ny italiana fitsipika ny raharaha mametraka fa izy ireo dia afaka manangana zaza iray ihany heterosexual mpifankatia sy ny mpivady. Misy, amin’izao fotoana izao, ny mety ny fananganan-jaza ataon’ny ray aman-dreny tokan-tena na cohabiting. Naniry ray aman-dreny nitaiza, indrindra indrindra, tsy maintsy nanambady ho telo, fara fahakeliny, ny taona, na, raha ny fanambadiana no nifarana vao haingana kokoa, rehefa niaina hatrany ho telo, fara fahakeliny taona alohan’ny fanambadiana. Ankoatra izany, dia misy ny sokajin-taona ahafahana ho an’ireo izay nanapa-kevitra ny hanaraka ny zaza: ny mpikambana tanora indrindra ao amin’ny mpivady dia tsy maintsy manana ny taona maha samy hafa ny tsy latsaky ny valo ambin’ny folo, ary tsy mihoatra ny dimy amby efa-polo taona, raha ampitahaina amin’ny ny nitaiza ny zanany lahy. Misy fanafahana raha ny kely iray voan’ny aretina sasany, raha toa ka mpivady manan-janaka (voajanahary na nitaiza), izay ny iray fara-fahakeliny zaza tsy ampy taona, raha ny fananganan-jaza olana amin’ny rahalahy na anadahy na rahavavy ny zaza iray efa nandray izany koa ny mpivady, na raha toa ianao ka liana amin’io fotoana io ihany, bebe kokoa ny rahalahy, izay ny iray fara-fahakeliny manana taona izay mianjera ao anatin’ny faritry ny lalàna. Ny taona ny zaza misafidy ny hanaraka mety hisy fiantraikany eo ny faharetan’ny fizotry, manitatra na haingana ny fotoana miandry.»Ny sasany amin’ireo tsiroaroa fa izahay nanaraka ny fananganana ny zanaka teraka ao Filipina no andrasana ihany volana vitsivitsy, izy ireo satria nanapa-kevitra ny hanaraka ny zaza izay efa mihoatra ny enina taona,»hoy izy. Noho izany dia azo atao ny manangana zaza iray volana vitsivitsy, fa izany no ilaina fa ny azo tendrena ho ray aman-dreny tsy hihoatra ny taona fetra napetraky ny lalàna, ary ny fitsarana tamin’izay fotoana izay dia nanana ny fotoana nanambara ny zaza adoptable (koa ao ny raharaha ny ankizy»nilaozan’ny»ao amin’ny hopitaly). Inona no cost hanaraka ny zaza ao Italia. Ny vola ho amin’ny fananganana ny ankizy no tena miova.»Amin’ny raharaha ao an-toerana ny fananganan-jaza ny vola lany dia ambany dia ambany,»hoy Izay — noho ny zava-misy dia ny azy dia manangana, izay tompon’andraikitra ny amin’ny fandaniana ilaina ny fanohanana ny ankizy mandra-pahatonga azy dia nanambara adoptable, sy noho ny fizotry ny tsy mahakasika ny olona tsy miankina.»Manova zavatra ny raharaha iraisam-pirenena ny fananganan-jaza, satria misy ny hizaka ny fandaniana mikasika ny fikambanana na ny hafa tsy miankina, fikambanana izay miaraka amin’ny ray aman-dreny ny diany. Ny vola lany amin’ny ny maro alina euros ny fahapotehana, fa mety tsy hitovy amin’ny saro-pady-dalana.»Toy ny ao amin’ny sehatra rehetra — manampy Daniela Bertolaso — misy ny olona izay miezaka ny ho voafetra ihany ny vidim-piainana, sy ny hafa izay milaza ny natao ny ray aman-dreny, fa ny tsy manan-kery ny ampahany amin’ny dingana rehetra».
Niandry ny fotoana mba hanaraka ny zaza
Ny fotoana izay elapse avy, rehefa roa dia nanambara fa mety ho ny fananganana rehefa raha ny marina dia mandray ny ankizy ao amin’ny fianakaviana dia mety miovaova be arakaraka ny habetsaky ny fisian’ny izy roa ireo, miaraka amin’ny fanajana ny taona noraisin’ny zanakao na ny fananganan-jaza maro, iray tam-po na ny ankizy amin’ny olana ara-pahasalamana.»Ny eo ho eo ny miandry ny fotoana dia manodidina ny roa taona sy tapany avy ny fotoana ‘ny fanambarana ny vady sahaza», hoy ny guido Bertolaso, ary matetika eny anelanelany ary raha ao amin’ny fianakaviana no misy dia efa niteraka zaza, satria amin’ity tranga ity ny lalàna dia mitaky fepetra ireo kokoa mba hiarovana azy ireo».
Ny fananganan-jaza teny lavidavitra
Hanaraka ny zanakao avy lavitra dia safidy samy hafa tanteraka, izay manome — matetika amin’ny alalan’ny fikambanana amin’ny anarana na iraisam-pirenena — noho ny fanohanana ara-bola sy mitohy amin’ny fotoana) ny ankizy izay mbola apetraka ao anatin’ny biolojika fianakaviana. Raha ny mahazatra, ny mpanao soa mandray tsy tapaka ny vaovao farany ao amin’ny toerana misy ny fahasalamana ny ankizy, ny ny fianarana ny fandrosoana, ny azo atao fampidirana, raha vao vita ny lalana ny fanabeazana, eo amin’ny tontolon’ny asa. Na ahoana na ahoana, dia misy ihany koa ny mety ho ara-batana hitsena ny zaza, foana mitondra ao an-tsaina fa ny fananganan-jaza teny lavidavitra dia tsy manondro manome ny ankizy amin’ny fianakaviana iray, izay ara-dalàna efa misy, fa mba hanohana azy sy ny fanohanana azy avy ara-toekarena fomba fijery
Ny fanafoanana ny tena toetrany